အစားအသောက်စွဲ - သင့် ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အစားအသောက်စွဲလေ့လာမှုများ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်း) နှင့်ပတ်သက်သည့်အပိုင်းရှိသနည်း။ ပထမဆုံးအနေဖြင့်၎င်းသည်အကျင့်စွဲစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အစားအသောက်နှင့်လိင်သည်အဓိကအားဖြင့်သဘာဝအားဖြည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သော dopamine ထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်စနစ်ကိုလှုံ့ဆော်သည်။ တတိယအနေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာနဲ့မတူဘူး။
သုတေသနထုတ်ဖော်ပြသနေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အမှန်တရား: Highly အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (နှင့်လောင်းကစားဝိုင်း, ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း) စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူနည်းလမ်းတွေထဲမှာဦးနှောက်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း superstimulating အတူတူမပွုနိုငျကွောငျးကိုကူးဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာမထက် dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖြန့်ချိ ပို. ; နှင့်အစားအစာနှင့်မတူဘဲစားသုံးမှုရန်မန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ သင် dopamine စားရပြီးတာနဲ့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကနာရီသို့ခြီးမွှောကျ dopamine အဆင့်ဆင့်ထိန်းထားနိုင်တယ်။
ဤအခန်းတွင်အများပြည်သူအတွက်ဆောင်းပါးများနှင့်သုတေသနဆောင်းပါးများပါ ၀ င်သည်။ သငျသညျစွဲကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်လျှင်, ငါ lay ဆောင်းပါးများနှင့်အတူစတင်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို“ L” ဖြင့်မှတ်သားထားသည်။
(L) compulsive overeating နှင့်စွဲအကြားအမူအကျင့်, ဇီဝတူညီ၏သက်သေအထောက်အထား (2019)
အစာအိမ် Bypass လုပ်ရခွဲစိတ်ကုသခြင်းမပြုမီနှင့်ပြီးနောက်ဗဟို Dopamine receptor ၏ ALTER ။ (2010)
စား Disorders နှင့်အတူလူနာများတွင် "အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု" Long-Term ရည်မှန်းချက်များ (2016) အပေါ်အာရုံစိုက်ဖို့အပျက်သဘောဆောင်သောအရေးတကြီးသဘောထားနဲ့နှင့်အခက်အခဲများနှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
စွဲလမ်းစေသည့်အစားအစာစားသုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍“ အစာစားခြင်း” နှင့်“ စားသောစွဲလမ်းမှု” အပေါ်အမြင်များ (၂၀၁၆)
အဝလွန်ခြင်းနှင့်အနီကိုတင်းစွဲလမ်း (2013) ၏တစ်ဘုံဇီဝအခြေခံ
အတိအကျ D2 receptor ၏တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (n- [11C] မီသိုင်း) benperidol (2013) နဲ့ပေအသုံးပြုခြင်းအဝလွန်နှင့်ပုံမှန်-အလေးချိန်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် binding
တစ်ဦးကအူ Lipid Messenger ကို Dopamine Deficiency (2013) အားပိုလျှံအစားအသောက်အဆီ Links
အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့နှင့်အတူပေါင်းစပ်တစ်ဦးက high-အဆီဓာတ်စာအစားအစာကိုရှာခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏ကိုယ်စားလှယ်လောင်း biomarkers ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးတိုးပွားစေပါသည်။ (2016)
ဦးနှောက် dopamine receptors နှင့်အဝလွန်ခြင်းအကြားဆက်ဆံရေးဟာအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိစ္စထက်အစားအသောက်စွဲလမ်းတစ် metaanalysis? (2016)
Hedonic စား၏တစ်ဦးကနယူး Biomarker? ထူးခြားသော Opioid ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (2014) ကိုတစ်ဦးက cortisol နှင့်ပျို့ချင်တုံ့ပြန်ချက်၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
"စားနပ်ရိက္ခာစွဲ" (2014) မှဆက်ဆံရေးအတွက် Hedonic တုံ့ပြန်နိုင်မှု၏တစ်ဦးက Psycho-မျိုးဗီဇလေ့လာမှု
တိကျသောပဏာမ - နျူကလိယလမ်းကြောင်းသည်ခံနိုင်ရည်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အစားအစာစွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်း (၂၀၂၀)
အဝလွန်ခြင်းအတွက်ထစ်အငေါ့ mesolimbic dopamine-opiate အပြန်အလှန် (2015)
အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်အာရုံကြောဆားကစ်၏ abnormalities: တစ်ဦးကပျံ့ Tensor Imaging ကလေ့လာမှု (2016)
တစ်ခုတည်းအာရုံခံဆဲလျအမျိုးအစား activation စားဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်: အ prefrontal cortex အတွက် Dopamine D1 (2013)
နျူကလီးယပ် Accumbens အတွက် Dopamine receptor ၏ activation (2016) Sucrose-စစ်ကူ Cued ချဉ်းကပ်အပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်
အစားအသောက်စွဲလမ်း (2015) ဖြေရှင်းရန် ACT ၏ ACTonFOOD အခွင့်အလမ်းများ
ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry အတွက်မှီငြမ်းထားမှုများမြင့်မားသောအဆီဓာတ်စာဆုတ်ခွာ (2012) ကသွေးဆောင်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမတရားသောနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအခြေခံ
အာခေါင်အစားအစာများစွဲ: မူးယစ်ဆေးစွဲမှုပြဿနာ (2014) ၏အလိုသို့ Bulimia Nervosa ၏ Neurobiology Comparing
အဆိုပါကလေးဘဝအဝလွန်ခြင်းပျံ့နှံ့နေတဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ် Highly အပျြောအပါးစားနပ်ရိက္ခာမှစွဲ: တစ်ဦးကအရည်အသွေးသည်အင်တာနက်လေ့လာမှု (2011)
အစားအသောက်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း (2016) တွင်စွဲတူသော Synaptic ချို့ယွင်း
Preadolescents တစ်အဝန်းနမူနာအတွက်စွဲလမ်း-လိုပဲစား, body mass index နှင့်စိတ်ဓာတ်ဆက်စပ်မှု (2016)
ဆယ်ကျော်သက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစားအသောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း - ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးရှုထောင့် (၂၀၂၀)
နေ့စဉ်တစ်ဦး sucrose ဖြေရှင်းချက်အပေါ် bingeing ပြီးနောက်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့စိုးရိမ်စိတ် induces နှင့် dopamine / acetylcholine မညီမမျှ (2008) accumbens
ကျန်းမာရေးနှင့်အစားအသောက်စွဲလမ်းအတွက် Allostasis: fMRI (2016)
ပြောင်းလဲဦးနှောက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အချိုမြိန်အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးအတွက်တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့၏ဆက်နွယ်နေပါသည်: တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပုံရိပ်လေ့လာမှု (2017)
အဝလွန်ဘာသာရပ်များ၏ Postmortem ဦးနှောက် (2017) တွင်ပြောင်းလဲ Dopamine Synaptic ညွှန်မှတ်
တိုးမြှင့်ရေစာနှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (2013) အတွက်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်အာခေါင်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုစားသောက်ဆိုင်အစားအသောက်ထိတွေ့သည်အထိအတွက်ပြောင်းလဲကျွေးမွေးပုံစံများ
အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီရှိအနားယူ - ပြည်နယ်ကွန်ယက်များအကြားပြောင်းလဲမှုများ (၂၀၂၀)
ဖက်တမင်းဆေးပြား-sensitized ကြွက်တွင်းသကြားဓာတ်-သွေးဆောင် hyperactivity (လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive) နှင့်သကြား hyperphagia (2003) ကိုပြသ
အဆိုပါ obesogenic ပတ်ဝန်းကျင်ဘက်လိုက်မှုအစားအစာရွေးချယ်မှု (2015) adolescents မည်သို့တွဲဖက်အကောင့်
compulsive စားအပြုအမူများတိရိစ္ဆာန် & Models (2014)
အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်တိုးမြှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (2012) ကိုသကြားနဲ့အဆီ Bing ဆက်ဆံရေးတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ
လူသားတွေအတွက်ဆန္ဒရှိအေးစက် vs အစာစားချင်စိတ် (2015)
အချို့သောအစားအစာများသည်စွဲလမ်းနေပါသလား။ - ပြန်ကြားချက်။ (၂၀၁၄)
ရည်ရွယ်ချက်မထိုက်မတန်မမှန်စားသုံးခြင်း၏ trans ဆိုတဲ့ရောဂါရှာဖွေမော်ဒယ်များဖြစ်ပါသလား အစားအသောက်စွဲလမ်း (2018) အတွက်သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစား
လူ့ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအတွက်အစားအစာ cue-သွေးဆောင် activation နှင့်အတူ leptin ၏အသင်း (2012)
ပုံမှန်အလေးချိန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူလူကြီးများအတွက် compulsive, စားနပ်ရိက္ခာစွဲနှင့် Bing စား၏ရမှတ်များနှင့်အတူ Nesfatin-1, Acylated Ghrelin နဲ့ cortisol ၏အသင်း (2018)
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မိန်းကလေးများအနက်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောဆုကြေးထုတ်ယူခြင်းနှင့် Bing စားအကြားတွင်အသင်းအဖွဲ့များ။ (2017)
Dorsal Putamen နှင့် Non-အဝလွန်ကျန်းမာရေးအထီးအတွက်ခန္ဓာကိုယ် Mass Index (2) တွင် Dopamine D3 / 2015 receptor ရရှိနိုင်၏ Asymmetry
အဝလွန်သူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့် 'အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု' ကိုအပြန်အလှန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်မော်တော်ထိုးခြင်းတို့သည်အပြန်အလှန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည် (2016)
အဝလွန်လူနာများအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၊ “ အေးမြ” နှင့်“ ပူသော” အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ - ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ညွှန်းကိန်း၊ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်စားခြင်းပုံစံ (2019)
အဝလွန်နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အစားအစာတွေကိုအဘို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု: စာပေတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု (2015)
အဝလွန်ခြင်းအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မလုပ်ဖို့ Basal Ganglia အလုပ်မဖြစ် contributions (2016)
အလေးချိန် Gain ဖြစ်ပေါ်နိုင် (2015) နဲ့ Hunger သည် Associated ၏မရှိခြင်းအတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုမှ Basolateral Amygdala တုံ့ပြန်မှု
အစားအစာများ၏အားဖြည့်တန်ဖိုးကို၏အမူအကျင့်ာင်း: အဘယျသို့အစားအသောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဘုံ (2016) တွင်ရှိ
Bing စားရောဂါနှင့်နေကြလို့ပဲအဝလွန်ခြင်းဦးနှောက် (2018) တွင်လျှော့ချ mu-opioid အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်
ရောဂါနှင့် dopamine D2 အဲဒီ receptor စားသုံးခြင်း Bing: genotype နှင့် sub-phenotypes (2012)
Pre-လက်တွေ့မော်ဒယ်များအတွက်အစာစားခြင်း Bing (2015)
တစ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ၏ Bing ကဲ့သို့သောစားသုံးမှုအမူအကျင့်များလေ့ထိန်းချုပ်မှု accelerates နှင့် dorsolateral striatum (2014) ၏ activation အပေါ်မှီခိုဖြစ်ပါသည်
sucrose ၏ Bing ကဲ့သို့သောစားသုံးမှုအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက် (2018) တွင် sucrose ၏အကြိုးတန်ဖိုးကိုလျော့ကျစေပါတယ်
ကြွက်များအား Bing-Type စားနျူကလီးယပ် Accumbens နှင့် Ventral Tegmental ဧရိယာ (2) တွင် Neuromedin ဦး receptor 2019 အားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်
ကြွက်များတွင်ကန့်သတ် access ကိုအားဖြင့်သွေးဆောင် Bing-type အမျိုးအစားစားယခင်နေ့က (2004) ရက်နေ့တွင်စွမ်းအင်ကန့်သတ်မလိုအပ်ပါဘူး
ကြွက်များတွင် Bingeing: 1 ရက်ကြာ-In-4 ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို (2019) ကသွေးဆောင်အရေးပါတယ်လို့ဖြေရှင်းချက်မြင့်မားစားသုံးမှု၏ဇွဲ
ကြွက် Bingeing: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူ၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်? (2006)
မွှေးအဆီဓာတ်စာ (2008) ကိုကန့်သတ် access ကိုအတူကြွက်များတွင် Bing, Self-ကန့်သတ်ခြင်း, တိုးမြှင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်
ဂလူးကို့စားသုံးမှုကနေ Accumbens အတွက် BMI Module ကယ်လိုရီ-မှီခို Dopamine အပြောင်းအလဲများ (2014)
(2013) ဖော်ထုတ်ကျော်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဦးနှောက် circuitry
ဦးနှောက် dopamine နှင့်အဝလွန်ခြင်း (2001)
အဝလွန်ခြင်းအတွက်မြည်းစမ်းအမြင်များ၏ဦးနှောက် Imaging: တစ်သုံးသပ်ချက် (2019)
အစားအစာတဏှာ၏ဦးနှောက်စည်းမျဉ်း: အလေးချိန်အခြေအနေနှင့်စားအပြုအမူနှင့်အတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2016)
ဦးနှောက်လေ့လာမှုချောကလက်သွေးဆောင်များ၏အမြစ်များကိုဖျောပွ: Enkephalins ခလုတ်ကျော် (2012)
ဦးနှောက်အဖြူကိစ္စလူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် (2007) dieting များ၏ပြန်လည်ထူထောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု
Novell သို့မဟုတ်ကြွယ်ဝစေပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျဉ်း Exposure ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး (1) မှအတင်းအဓမ္မ Abstinence ၏ 30 သို့မဟုတ် 2012 နေ့ရက်များပြီးနောက်သည်အထိအတွက် Sucrose Cue-reactive နှင့်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါ
ကော်ဖီဆိုင်အစားအသောက်များတွင်အာရုံခံ-တိကျတဲ့မွတ်မပြေနှင့် (2014) သင်ယူခြင်းလှုံ့ဆော်မှု-ရလဒ်ကို၏စကားရပ်ချို့ယွင်း
စားနပ်ရိက္ခာကိုစှဲ Be နိုင်သလား? ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ပေါ်လစီအကျိုးသက်ရောက်မှု (2011)
အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်မူးရူးစား (2016) ၏လက်တွေ့-Level ဖြင့်အဝလွန်နှင့်အဝလွန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ
အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးမွတ်မပြေခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာ၏ Cholinergic မော်ဂျူ (2012)
တစ်ဦးကော်ဖီဆိုင်အစားအစာနှင့်နောက်ဆက်တွဲ abstinence ၏နာတာရှည်စားသုံးမှု။ အဆိုပါ mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ် (2013) တွင်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်လိင်-တိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်း: "နှစ်သိမ့်အစားအစာ" (2003) ၏အသစ်အမြင်
နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုဟာနျူကလိယ accumbens (2) တွင် DR2019 နှင့် Mor ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အစားအစာကိုစွဲလမ်းဖို့လွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးပွါး
အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း (2011) တွင်အဖြစ်များသည့်ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ
အစားအစာစားသုံးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးခြင်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ - တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များဖြင့်ရရှိသောအသိပညာ (၂၀၂၀)
ကြွက်များတွင်ကန့်သတ် access ကို-မူးရူးအပြုအမူအပေါ် hydrogenated ဟင်းသီးဟင်းရွက်အတိုကောက်နှင့်အာဟာရပြည့်စုံမြင့်မားတဲ့အဆီအစားအစာများ၏နှိုင်းယှဉ် (2007)
တစ်ခုစွဲရောဂါအဖြစ် compulsive ကျော်။ သီအိုရီများနှင့်သက်သေအထောက်အထားများတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု (2009)
အလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှု marmoset မျောက် (2014) တွင်တစ်ဦးတည်မြဲရာအရပျ-အေးစက်မှတ်ဉာဏ် induces
အရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုလျင်မြန်စွာ VTA (2016) တွင် Synaptic သိပ်သည်းဆတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အစားအစာကိုချဉ်းကပ်အပြုအမူ primes
cue-potentiated နို့တိုက်ကျွေးရေး (2018) မှ Pavlovian မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုပံ့ပိုးမှုများကိုသာ
ပြောင်းဖူးဆီ, မဟုတ်ကင်း, ပိန် Zucker ကြွက် (2015) တွင်ထက်အဝလွန်အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုထိရောက်စစ်ကူဖြစ်ပါသည်
လိုပဲ, တပ်မက်, စား: ခန္ဓာကိုယ် Mass အတွင်းကျယ်ပြန့် (2016) နဲ့ကလေးများနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတစ်နမူနာစားနပ်ရိက္ခာစားသုံးမှု၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်
CRF စနစ်ကစုဆောင်း compulsive စား (2009) ၏မှောင်မိုက်ဘက် mediates
အာခေါင်စားနပ်ရိက္ခာ (1) ၏ Amygdala differential ဖျန်ဖြေအလွန်အကျွံစား၏အလယ်ပိုင်းနှင့် Basolateral ခု၏နူကအတွက် CRF-CRF2013 receptor စနစ်
ပြစ်ဒဏ်အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် hypothalamus နှင့် basolateral နှင့် medial amygdala (2017) တွင်တိုးမြှင့် Fos စကားရပ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှာ Cue-သွေးဆောင်အစားအစာ
အစားအသောက်စွဲလမ်း (2015) နှင့် ပတ်သက်. လက်ရှိထည့်သွင်းစဉ်းစား
လူ့အဝလွန်ခြင်း၏မျိုးရိုးဗီဇ၏လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်: မော်လီကျူးယန္တရားများအနေဖြင့်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်မှ (2015)
D1- သို့သော် D2 ကဲ့သို့ dopamine receptor antagonist သည် Hippocampus ၏ CA1 ဒေသတွင်အစားအစာချို့တဲ့သောကြွက်များတွင်မီးဖွား။ မော်ဖင်းအအေးပေးစနစ်အားစိတ်ဖိစီးမှုပြန်လည်ဖြစ်စေခြင်းကိုလျှော့ချပေးသည် (2020)
သကြားပေါ် Daily သတင်းစာ Bing အကြိမ်ကြိမ် accumbens shell ကို (2005) တွင် dopamine ဖြန့်ချိ
အဝလွန်ခြင်းအတွက်တစ်ဦးကမျှဝေအားနည်း, လောင်းကစား Disorder နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorders: ဆုံးဖြတ်ချက်ချို့ယွင်းပြုလုပ်ခြင်း?
ထိန်းချုပ်ရေး compulsive Sucrose (2015) (Bing Mechanical) ရှာကြောင်းကုဒ်ဖြုတ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Circuits
ပဏာမတွေ့ရှိချက် (2): bariatric ခွဲစိတ်ပြီးနောက် dopamine အမျိုးအစား 2010 အဲဒီ receptor ရရှိမှုလျော့နည်းသွား
အစားအသောက် relapse (2007) အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အန္တရာယ်တိုးလာအစားအသောက် preference ကိုအသီးအနှံအတွက်လျော့နည်းစေ
ရုံးတင်စစ်ဆေးဒီဇိုင်း (2016) ကိုကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်: အဝလွန်များအတွက်နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ
ယင်းနျူကလိယ၏နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွ shell ကို dopamine neurotransmission (2015) ၏အပြောင်းအလဲတချို့နှင့်အတူအဝလွန်ကြွက်များတွင် Anti-အဝလွန်ခြင်းသက်ရောက်မှု induces accumbens
ကြွက်အစားအသောက်အဝလွန်ခြင်း (2009) တွင် mesolimbic dopamine neurotransmission ၏လိုငွေပြမှု
စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့် Stroop Task ကိုအပေါ်ဆင်းရဲတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုယ်အလေးချိန် (2018) နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်
အဆိုပါယေးလ်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစကေးဗားရှင်း 2.0 ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ (2016)
မောက်-တိုးတက်သောအချိုးတာဝန်အတွက်လေ့လာမှုများ (2012): အစားအသောက်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း ghrelin များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ blunts
အစားအသောက်အချက်အစာကိုဆုလာဘ်နှင့် (2012) စားရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုထိခိုက်
ကြွက်မော်ဒယ်မစားမူးရူးအတွက်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်ဆားကစ်အတွက်လှည်း၏ differential စကားရပ် (2015)
နာတာရှည် High-အဆီဓာတ်စာ-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း (2) မှကျရောက်နေတဲ့, ဒါမှမဟုတ်ခံနိုင်ရည်ကြွက်တွေမှာ dopamine D4 နှင့် D2005 အဲဒီ receptor နှင့် tyrosine hydroxylase mRNA ၏ differential စကားရပ်,
တစ်ဦး multimode MRI လေ့လာမှု (2017) မှအထောက်အထား: Dissociable corticostriatal ဆားကစ်ဂိုးညွှန်ကြား satiation ပြီးနောက် cue-ရူးနှမ်းလေ့အစားအစာရှာနှိုင်းယှဉ်အခြေခံ
ghrelin ၏စားနပ်ရိက္ခာဆုနှင့်စားသုံးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏အခြေခံကွဲပြားခြားနားသောအချက်များ - dopaminergic VTA-accumbens projection သည် ghrelin ၏အစားအစာဆုကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ သို့သော်အစားအစာစားခြင်းမဟုတ်ပါ။
အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူပြည်သူ့အတွက် Dopaminergic ချို့ယွင်း underlying ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှုပ်မရှားသလား? (2016)
အစားအသောက်စွဲတည်ရှိပါသလား? ပစ္စည်းဥစ္စာ-related မမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်း (2012) ၏စိတ်ရောဂါခွဲခြားအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးကဖြစ်စဉ်ဆွေးနွေးမှု
Dopamine နှင့်အပြုအမူစွဲအတွက် Opioid Neurotransmission: တစ်ဦးကရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်နှိုင်းယှဉ်ပေလေ့လာမှုနှင့် Bing စား (2016)
Dopamine D1 receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှရေရှည်ထိတွေ့မှုအပေါ်မှာနျူကလိယ accumbens အတွက်လျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ကြွက် (2016) တွင်အစားအစာ-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း phenotype ပေါ် မူတည်. မတူ
အဝလွန်ကြွက် (2) တွင်စွဲတူသောဆုလာဘ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် compulsive စား Dopamine D2010 receptors
Dopamine D2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရေး (2014)
Dopamine မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်လျှော့ချဆုလာဘ်-related ventral striatum လှုပ်ရှားမှု (2018) မှတဆင့်အစားအစာစွဲနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါသည်
အစားအသောက်စွဲလမ်းထဲမှာအချက်ပြ Dopamine: dopamine D2 receptors ၏အခန်းကဏ္ဍ (2013)
Dorsal Striatal Dopamine, လူသားတွေဟာစားနပ်ရိက္ခာဦးစားပေးမှုနဲ့ကနျြးမာရေးအမြင် (2014)
နှိမ့်ချ-စည်းမျဉ်းအစားအသောက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူကြွက်များ၏တိကျသော extrahypothalamic ဒေသများတွင် cannabinoid-1 (CB-1) receptors ၏: အရေးပါတယ်လို့များစားစရာဘို့အစာစားချင်စိတ်ကိုမောင်းနှင်အတွက် endogenous cannabinoids များအတွက်အခန်းကဏ္ဍ? (2002)
အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးရှာထဲမှာ dopamine ၏ dual အခန်းကဏ္ဍ: drive ကို-ဆုလာဘ်ဝိရောဓိ (2013)
အရက်, မူးယစ်ဆေးများနှင့်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ (2017) ၏ Preclinical & Models အတွက် Dynorphin / Kappa Opioid receptor signal
Dyshomeostasis, အဝလွန်ခြင်း, စွဲလမ်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု (2016)
'Junk-food' သည် NAc CP-AMPA Receptors များလျင်မြန်စွာနှင့်ကြာရှည်စွာတိုးပွားစေသည်။ Enhanced cue- သွေးဆောင်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အစားအစာစွဲများအတွက်ဂယက်ရိုက်မှု (2016)
အစာစားခြင်းရောဂါများ - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာဆိုင်ရာရောဂါကုသမှုနည်းလမ်း (2019)
အသက်ရှင်ဖို့အစာစားခြင်းသို့မဟုတ်အစာစားမှအသကျရှငျ? Self-ရိပ်မိအစားအသောက်စွဲလမ်း (2015) ၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အရည်အသွေးများ Exploring
ငါတို့မျက်စိနှင့်အတူစား: အမြင်အာရုံငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုကနေဒစ်ဂျစ်တယ် satiation (2018) မှ
ရေရှည်ပုံစံများအစာစားခြင်းစားသုံးမှုအပေါ်အရေးပါတယ်လို့ကော်ဖီဆိုင်အစားအစာနှင့်ပုံမှန် Chow အကြားစက်ဘီးစီးခြင်း, နှင့် saccharin နှင့် sucrose တုံ့ပြန် (2015) ၏ဆိုးကျိုးများ
sucrose နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ကြွက်များတွင် Spatial မှတ်ဉာဏ် function ကိုနှင့် hippocampal neuroinflammation အပေါ်မြင့်မားသော fructose ပြောင်းဖူးရည်စားသုံးမှု (2015) ၏ဆိုးကျိုးများ
ဓာတ်လှေကားစွမ်းအင်စားသုံးမှု, အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် hyperresponsivity ဆက်နွယ်နေကြောင်း gustatory နှင့်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာလက်ခံရရှိ (2013) ထားချက်အရအနေဖြင့်ဦးနှောက်ဒေသများဆုချနေသည်
စိတ်ခံစားမှုစား Phenotype ဗဟို Dopamine D2 receptor ခန္ဓာကိုယ် Mass Index (2015) ၏လွတ်လပ်သော binding နှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
အဝလွန်ခြင်း-ကျရောက်နေတဲ့ကြွက်များတွင် Enhanced မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု NAc core ကိုက CP-AMPARs (2018) ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
ရောဂါအစာစားမူးရူးအတွက်အစားအစာဆွစဉ်အတွင်း Enhanced striatal dopamine လွှတ်ပေးရေး (2011)
စားကိုစှဲကဲ့သို့သောအပြုအမူ (2015) ကအရောင်းမြှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်နှင့် Proteomic ဖော်ပြမှုအပြောင်းအလဲများ
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ, အမည်းစက်များနှင့်ပေါ်လစီအကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ဦးက SCOPE သုံးသပ်ချက် (2019)
အလွန်အမင်းနှစ်သက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (2014) အားအခြား access ကိုထိတွေ့ကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်အထောက်အထား
သကြားစွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု (2008) ၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ
'အစားအသောက်စွဲလမ်းခြင်း' သည်အ ၀ လွန်ခြင်း၏ခိုင်လုံသောဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်သည် (၂၀၁၁)
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု endogenous opioid မှီခို (2002) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ
တစ်ဦးဟစ်စပန်းနစ် bariatric ခွဲစိတ်ကုသ-ရှာပါဝင်သူအဖွဲ့ (2019) တွေထဲမှာစားနပ်ရိက္ခာစွဲနှင့် Acculturation ဆန်းစစ်ပါ
သကြားမှီခို (2007) ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်သုံးပြီးမူးရူးစား၏စွဲလမ်းကဲ့သို့ဂုဏ်သတ္တိများဆန်းစစ်ပါ
သကြားများအလွန်အကျွံစားသုံးမှု: ဆုကြေးတစ်ခု Insatiable Drive ကို (2019)
dopamine နှင့်ဦးနှောက်အတွက် mu-opioid receptors (2001) မှ binding အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှုအတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်း
အစားအသောက်စွဲလမ်းအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ: ပြင်းထန်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားလေ့လာမှုတစ်ခု (2018)
အဝလွန်ခြင်း, စားနပ်ရိက္ခာစွဲအတွက်အလုပ်အမှုဆောင် functions တွေရှိကြပြီး Bing-စား Disorder ။
ကလေးအထူးကုလူနာအတွက်အစားအသောက်စွဲလမ်း၏တူးဖော်ရေး: တစ်ဦးကပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (2009))
Ultra-လုပ်ငန်းများ၌အစားအစာနှင့်အဝလွန်ကလေးငယ်များအတွက်အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့ (2018) ၏စားသုံးမှု Exploring
high-အဆီမြင့်မားသောသကြားအစားအသောက်များတွင် exposure proopiomelanocortin ၏အားကြီးသောတက်-စည်းမျဉ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်အ differential dopamine D1 နှင့်ကြွက်များ၏ brainstem အတွက် D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ် (2014) အပေါ်သက်ရောက်မှု
ပိန်နှင့်အဝလွန် Zucker ကြွက်များ၏ hypothalamus အတွက် dopaminergic receptors ၏ expression နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု (2002)
တစ်အရေးပါတယ်လို့ကော်ဖီဆိုင်အစားအသောက်များတွင်တိုးချဲ့ထိတွေ့ဆုလာဘ်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဗီဇစကားရပ်ပွောငျးလဲ, ဤအစားအစာကနေဆုတ်ခွာစိတ်ဖိစီးမှု (2014) နဲ့ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်ဗီဇစကားရပ်ပွောငျးလဲ
အဆီ / ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အချိုးအစားမဟုတ်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (2015) သရေစာအစားအသောက်စားသုံးမှုဆုံးဖြတ်သည်နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသများမြှင့်လုပ်ဆောင်
နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်: Bing စားသုံး Rat & Models ကနေပတ်သ က်. (2012)
စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အတူအစားအစာစွဲလမ်းနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ: Meta-analysis သည် (2018) နဲ့စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုနှင့် Bing စား: တိရိစ္ဆာန် & Models (2017) မှသင်ခန်းစာ
အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့် dopaminergic multilocus မျိုးရိုးဗီဇပရိုဖိုင် (2013) နဲ့သူ့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့
အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့် disorders စားအပြုအမူများနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေး (2019)
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်း: Do Macronutrients အရေးပါ? (2012)
အမျိုးသမီးတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာစွဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ: အဖြစ်များသည့်လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ (2018)
သစ်တစ်ခုအမူအကျင့်စွဲ (2016) အဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ
အဆိုပါအဝလွန်မူဘောင် (2015) ၏အသစ်တခုအပိုင်းအစအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ
ရောဂါနှင့်အဝလွန်ခြင်းပြင်းထန်မှု, စိတ်ဒဏ်ရာသမိုင်း, PTSD ရောဂါလက္ခဏာနှင့် comorbidity (2017) အစာစားခြင်းအဘို့အ proxy ကိုအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ
စား Disorders နှင့်အတူလူနာအတွက်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ Long-Term ရည်မှန်းချက်များ (2016) အပေါ်အာရုံစိုက်ဖို့အပျက်သဘောဆောင်သောအရေးတကြီးသဘောထားနဲ့နှင့်အခက်အခဲများနှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
DSM-5 ၏အလင်းစားနပ်ရိက္ခာစွဲ (2014)
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု bariatric ခွဲစိတ်မှုအတွက်အဝလွန်လူနာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအတွက်အဆင့်မြင့် Neuroticism, အောက်ပိုင်းအသိစိတ်, အဆင့်မြင့် Impulse, ဒါပေမယ့်အောက်ပိုင်း Extraversion (2018) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
အစားအသောက်စွဲလမ်းချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး (2016) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစရိုက်များတော့ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ခံစားမှုစား (2019) ကနေတဆင့်အဓိပ်ပါယျမရှိသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
အစားအသောက်စွဲလမ်းညဥ့်စားပြင်းထန်မှု (2016) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဗဟိုဘဏ် States မှာ Amygdala တုံ့ပြန်မှု (2019)
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု, High-များသော-ညွှန်းကိန်းဘိုဟိုက်ဒရိတ်များနှင့်အဝလွန်ခြင်း (2017)
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု: အဝလွန်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများအတွက်ထိရောက်သောအလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတှကျအတားအဆီး (2017)
အစားအသောက်စွဲလမ်း: အထွေထွေလူဦးရေ (2013) တွင်အဝလွန်နှင့်အတူ၎င်း၏ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့
စားနပ်ရိက္ခာပြီးတော့စွဲ: သကြား Fats နှင့် Hedonic ကျော်။ (2011)
အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှုကို: အလားတူနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု (2017)
စွဲလမ်းကဲ့သို့စားနှင့်ပြဿနာစားရလဒ်များ (2015) အကြားတစ်ဦးဖျန်ဖြေအဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာတဏှာ
အစားအသောက်စွဲလမ်းစားနပ်ရိက္ခာမတရားသော: အစားအစာတဏှာမေးခွန်းလွှာ-စရိုက်များ-လျှော့ချ (2018) ၏အလားအလာ cut-off တန်ဖိုးကိုရှာဖွေစူးစမ်း
အစားအသောက်စွဲလမ်းစားနပ်ရိက္ခာမတရားသော: အပြုသဘောအားကောင်း (2012) ၏ကွဲပြားအခန်းကဏ္ဍ
"အစာ-စွဲ" ၏စိစစ်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2014): တစ် psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးတုံ့ပြန်စားနပ်ရိက္ခာမတရားသော, အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ရေစာ-အစားအစာစားသုံးမှု
စားနပ်ရိက္ခာမတရားသော, အစားအစာစွဲလမ်းနှင့်အာရှအမေရိကန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦး dopamine ယဉ် (DRD2 A1) အဲဒီ receptor polymorphic (2016)
အစားအသောက်စွဲလမ်းစားနပ်ရိက္ခာ cue reactivity ကို: တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု (2019)
အတွေးအခေါ်စားစရာဘို့: အဝလွန်ခြင်းအတွက် (2017) ယန္တရားများနှင့် Hedonic ကျော်၌ဆပ်
အစားအသောက်အရည်အသွေးနှင့်လှုံ့ဆော်မှု: တစ်သန့်စင်ပြီးအနိမ့်အဆီဓာတ်စာအဝလွန်ခြင်း induces နှင့်ကြွက် (2014) တွင်နှိပ်ဆာလီဗာတစ်တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ချို့ယွင်း
အစားအသောက်ကန့်သတ်ကြွက်များအား Dopamine D2 receptor (2007) အားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
အစားအသောက်ကန့်သတ်နျူကလိယ Accumbens အတွက်ကယ်လ်ဆီယမ်-Permeable AMPA receptor (2017) ၏ Synaptic ထဲဆွဲသွင်းပါဝင် Induces
စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်စနစ်က: လက်ရှိအမြင်များနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလိုအပ်ချက်များကို (2015)
mesolimbic dopamine စနစ် (2012) တွင် ghrelin နှင့် opioid အဲဒီ receptor လမ်းကြောင်း၏စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်-အထိခိုက်မခံအပြန်အလှန်
စားနပ်ရိက္ခာဆုလာဘ်, hyperphagia နှင့်အဝလွန်ခြင်း (2011)
ကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက်, pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု (2006) အပေါ်သက်ရောက်မှုမှအစားအစာသွေးဆောင်အပြုအမူ sensitive ကယင်း၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive
အစားအစာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှု differential မျက်လုံးလှုပျရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ပုံမှန်-အလေးချိန်, အဝလွန်နှင့်အဝလွန်ပုဂ္ဂိုလ်များ (2017) တွင်ဂိုး-ညွှန်ကြားသည်အပြုအမူ
အစားအစာများကို differential အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှု (2017) ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကျိုးသက်ရောက်မှုအစီရင်ခံစာမေးခွန်းများကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်
အခမဲ့-ရွေးချယ်မှုနှင့်မျှမ-ရွေးချယ်မှုက high-အဆီအစားအစာ striatal dopamine D2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု, ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့် adiposity (2012) ကိုထိခိုက်
ဖructose - ဂလူးကို့စ်အချိုး - သကြားကိုအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ကြွက်များတွင်အာရုံကြောနှင့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုလေ့လာခြင်း (၂၀၁၅)
compulsive ကျော်နှင့်စွဲ Phenotypes အကြားမျိုးရိုးဗီဇအလားတူ: အစားအသောက်စွဲလမ်းများအတွက်တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်? (2015)
ပုံမှန်-အလေးချိန်လူကြီးများ (2012) vs. အဝလွန်အတွက်စားပြီးနောက် High-ကယ်လိုရီအစားအစာတွေကိုပိုမို corticolimbic activation
GS 455534 ရွေးချယ်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမူးရူးစားသောက်ဖိနှိပ်ခြင်းနှင့်သကြား-bingeing ကြွက် (2014) ၏ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန် attenuates
သဘာဝကဆုလာဘ်မှ Hedonic sensitivity ကိုတစ်ဦးလိင်-မှီခိုထုံးစံ (2015) တွင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ထိခိုက်နေသည်
သတိလစ်ထိန်းချုပ်ရေးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် (2016) ဖို့ Homeostatic စနစ်နှင့်အတူ unison အတွက် Hedonics အက်ဥပဒေ
အဝလွန်ခြင်းတွင်ကယ်လိုရီမြင့်မားသောအစားအစာများတင်ပြမှု၌အ ၀ လွန်ရောဂါသည်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်မားသောအင်္ဂါဇာတ်လှုပ်ရှားမှု - စမ်းသပ်လေ့လာမှုရလဒ် (၂၀၁၄)
ကြွက်များတွင်ဘိန်းဖြူနှင့် saccharin ဝယ်လိုအားနှင့် preference ကို (2017)
အင်ဆူလင်ကိုခံနိုင်ရည်လူနာများ (2013) တွင်အနိမျ့ Dopamine ဖြန့်ချိရန်လင့်ခ်လုပ်ထားသောအမြင့်သကြားစားသုံးမှု
high-အဆီအစားအသောက်များတွင်အမျိုးသမီး heterozygous Mecp2-တရားမဝင်သောကြွက် (2019) တွင် hyperphagia နှင့်အတူအစွန်းရောက်အဝလွန်ခြင်း accelerates
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့်မားအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ access ကိုအထီးအတွက် anxiety- / စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးလာပေမယ့်မရအမျိုးသမီးအတွက်ကြွက် (2017)
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းမြင့်မားအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ access ကိုအထီးအတွက် anxiety- / စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူတိုးလာပေမယ့်မရအမျိုးသမီးအတွက်ကြွက် (2018)
Homeostatic နှင့် Hedonic နေရင်မြန်အောင်စားနပ်ရိက္ခာစားသုံးမှု (2009) ၏စည်းမျဉ်းဥပဒေထဲမှာဆကျဆံပါ
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု (2014) နှင့်မပါဘဲအဝလွန်လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ဟော်မုန်းနှင့်အစားအသောက်လက်ခဏာ
Hyperactive hypothalamus, လှုံ့ဆော်မှုများနှင့် ADAR2 Transgene ကြွက် (2013) တွင် Non-အာရုံနာတာရှည်ကျော်
Hyperpalatability နှင့်အဝလွန်ခြင်း၏မျိုးဆက်: ပတ်ဝန်းကျင်၏အခန်းကဏ္ဍ, စိတ်ဖိစီးမှု Exposure နှင့်တစ်ဦးချင်း Difference (2018)
ဦးနှောက် Dopamine Pathways ၏ imaging: အဝလွန်ခြင်းကိုနားလည်ခြင်းအဘို့အအကျိုးသက်ရောက်မှု (2009)
ကြွက်တွေမှာမြင့်မားတဲ့ဆီ-အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဦးနှောက် striatum အတွက် dopamine D2 receptors ၏ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုမော်ဂျူအပေါ်အညိုရောင်ဆန်-တိကျတဲ့γ-oryzanol ၏သက်ရောက်မှု (2017)
အဆိုပါ Mesolimbic Dopaminergic စနစ်အပေါ်အမြင့်-ဆီ Diet ၏အစောပိုင်းစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှု (2017)
Morbidly အဝလွန်လူကြီးများများထဲတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချချို့ယွင်း။ (2011)
အပျက်သဘောဆောင်သော Mood အမေရိကန်, စိတ်ခံစားမှုစားများနှင့်စားနပ်ရိက္ခာစွဲအတွက် Impulse Control ကိုပြင်းထန်သောအဝလွန်ခြင်း (2017) နဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်ဘဝအသက်တာ၏အောက်ပိုင်းအရည်အသွေးနှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့နေကြတယ်
ကြွက်များတွင်တစ်ဦးက high-အဆီဓာတ်စာအစာစားချင်စိတ် (2019) ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ '' ဘရိတ် '' လျှော့ချ
ကြွက်များတွင် High-စွမ်းအင်အစားအစာ, အရသာထက်အဆီ content တွေကိုကျွေးမွေးအစားအစာစားသုံးမှုတိုးပွားလာသော့ချက်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်: တစ်ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ပြီး lipid-ဖြည့်ဆည်းစံအစားအစာ (2017)
အဆီ Bing (2018) ၏ပြတ်တောက်ပြီးနောက်တိုးမြှင့်အီသနောစားသုံးမှု
ပိုလျှံအလေးချိန်နှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အတွက်တိုးမြှင့်အစားအစာရွေးချယ်မှု-evoked ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်: ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာနှင့်အပြုအမူနှင့်အတူဆက်ဆံရေး (2018)
saccharin တဏှာနှင့်ယခင်က saccharin နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့ cue များအတွက်တုံ့ပြန်အတွက်အတွင်း-session တစ်ခုအပြောင်းအလဲများကို (2013) ၏ပေါက်ဖွား
အင်ဆူလင် cholinergic interneurons ကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်ဖြင့်ဆုလာဘ် (2015) အချက်ပြလိုက်ခြင်း
ပြင်းထန်သောချိုကင်းဆုကြေး (2007) ထက်မလွန်
Intravascular စားနပ်ရိက္ခာဆုကြေး (2010)
အစားအသောက်စွဲလမ်းခိုင်လုံသောနှင့်အသုံးဝင်သော concept ကိုလား? (2013)
“ အစားအစာသုံးစွဲမှုရောဂါ” ကိုစဉ်းစားရန်အချိန်တန်ပြီလား။ (၂၀၁၇)
အဝလွန်ခြင်း ADHD ဖို့လင့်ခ်လုပ်ထားသောသလဲ? (2013)
ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ဒဏ္ဍာရီတွေဆီကနေရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်: သင်ကမကောင်းတဲ့အစားအစာ (2015) outrun မနိုင်
junk အစားအစာအစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်းဟာ ventral tegmental ဧရိယာ၌ D2 အဲဒီ receptor autoinhibition တိုးပွါးနှင့်အီသနော (2017) သောက်သုံးမှုကိုလျော့နည်းစေ
မူးယစ်ဆေးဝါး, လောင်းကစား, အစားအစာနှင့်လိင်တွေကိုမှ reactivity ကို၏အကြီးအကျယ်ထပ်အာရုံခံအလွှာ: တစ်ဦးကပြည့်စုံ Meta-analysis သည် (2016)
hedonic နှင့်နျူကလိယတာရှည်-တည်မြဲလိုငွေပြမှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (2016) စဉ်အတွင်းသကြား overconsumption အားဖြင့်ချိုမြိန်ဆုလာဘ်မှ reactivity ကို accumbens
ရေရှည်, ကြွက်များတွင်တစ်ဦးက high-အဆီအစားအစာများ၏ကယ်လိုရီ-ကန့်သတ်စားသုံးမှုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့် ventral striatal D2 အဲဒီ receptor အချက်ပြမှုကိုလျော့နည်းစေ: စွဲအားနည်းချက်နှစ်ခုအမှတ်အသားများ (2015)
ကြွက်များအားအာခေါင်စားနပ်ရိက္ခာစားသုံးမှုကျော်အနိမျ့ထိန်းချုပ်ရေးလေ့အပြုအမူနှင့် Relapse အားနည်းနှင့်ဆက်စပ်သည်: တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ () 2013
ကြော်ငြာ libitum ကျွေးမွေးကြွက် (2013) တွင်ရေစာအစားအသောက်များ၏စားသုံးမှုနဲ့ဆက်စပ်တပြင်လုံးကိုဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံများမြေပုံများအတွက်မန်းဂနိစ်-တိုးမြှင့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်
အစားအစာဆုလာဘ်တစ်ခု function ကိုအဖြစ် Mesolimbic dopaminergic စနစ်ကလှုပ်ရှားမှု: တစ်ဦးက microdialysis လေ့လာမှု (1996) ။ ပုံမှန် Chow ထက် junk အစားအစာပိုမိုမြင့်မား
အလယ်အလတ်အဆင့်မြင့်ဆီအစားအသောက်လူငယ်သည်အထိ (2013) ခုနှစ်တွင် Sucrose ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်အတူအဝလွန်နှင့်အဝလွန်လူနာ EEG functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုများနှင့် EEG ပါဝါဖြာထွက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများ၏ပြုပြင်မွမ်းမံ: An eLORETA လေ့လာမှု (2015)
prefrontal cortical mu-opioid receptors ခြင်းဖြင့်အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှု၏ Modulation ဒေသခံ dopamine D1 အဲဒီ receptor အချက်ပြ (2018) အပေါ်သို့မှီခိုဖြစ်ပါသည်
Bing စား Disorder (2013) နှင့်အတူနှင့်မရှိရင်အဝလွန်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ငွေကြေးဆုကြေးထုတ်ယူခြင်း
Bing-စား (2011) ၏တစ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်အကျိုးဆက်များနေသော်လည်းအာခေါင်စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်လှုံ့ဆျောမှု
အဝလွန်ခြင်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာစွဲမှဆက်ဆံရေးအတွက် Impulse ၏ Multidimensional အကဲဖြတ် (2016)
Naloxone ကြွက်များတွင်ပေါက်ဖွား sucrose တဏှာ (2007) attenuates
ကြွက်များတွင်ကြွက်များတွင်အစာစားခြင်းမြင့်မားသောအဆီအစာကျွေးခြင်းအပြုအမူများအကြားအတွင်း - accumbens opioid- မောင်းနှင် consummatory အပေါ် basolateral amygdala သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအခြေခံအာရုံကြော activation ပုံစံများ (2015) - BINGE MECHANISM
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု (2011) ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
Stress- နှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်စားနပ်ရိက္ခာ Cue-သွေးဆောင်စားနပ်ရိက္ခာတဏှာ (2013) ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
အစားအစာဆုလာဘ်၏အာရုံကြောဒိုင်းနမစ်; ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, cue ထိတွေ့မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု (2013)
အာရုံကြောစနစ်များတစ်ခုစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ: ဇီဝထံမှအမူအကျင့်ယန္တရားများ (2016) မှ
တစ်ဦးကနယူးဖြစ်ရပ်ဆန်းဘုံ bariatric ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် (2011): "စွဲလမ်းလွှဲပြောင်း" ၏အမြစ်အကြောင်းအဖြစ်ဆုကြေး Deficiency Syndrome (RDS) ၏ Neuro-မျိုးရိုးဗီဇ
အချိန်ကြာမြင့်စွာအလွန်အကျွံ sucrose စားသုံးမှု (2014) အောက်ပါကြွက်များ၏ striatal proteome အတွက် Neuroadaptations
မူးရူးစားရောဂါ (2015) ၏ Neurobiological features တွေ
အစားအသောက်စွဲလမ်း၏ Neurobiology (2010)
Neurogenetic နှင့်အဝလွန်ခြင်း (2015) မှ Dopaminergic အလှူငှမြေား၏ Conceptual မော်ဒယ်အဘို့သက်သေသာဓက Neuroimaging
စားအပြုအမူကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ကာကွယ်တားဆီးများနှင့်မမှန်ခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်း (2015) အစာစားဆကျဆံဖို့ Neuroimaging နှင့် neuromodulation ချဉ်းကပ်မှု
အာရုံခံနီကိုတင်း Acetylcholine receptor Module သကြားစားသုံးမှု (2016) Reduce
compulsive စား၏ Neuropharmacology (2018)
အဆိုပါ Medial Pre-တိုကျရိုကျ Cortex အတွက် Norepinephrine သာလျှင်အစားအစာကန့်သတ်ထားကြွက်တွေက (2018) တွင်တစ်ဦး Novell အာခေါင်စားနပ်ရိက္ခာမှ Accumbens Shell ကတုံ့ပြန်ချက်ထောက်ပံ့
အဝလွန်ခြင်းနှင့်စွဲ: Neurobiological ထပ်။ (2012) Nora Volkow
အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစွဲမှ၎င်း၏ဆက်ဆံရေးကိုစှဲအပြုအမူတစ်ခု Form ကို Overeating ပါသလား (2009)
အဝလွန်ခြင်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဆုကြေးနှင့်စားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်ရေး (2015) ၏ Neurocognitive အခြေခံ
အာရုံခံစားမှုနှင့် hypofrontality (2012): အဝလွန်ခြင်းပြောင်းလဲဦးနှောက် function ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
အဝလွန်ခြင်းဟာဦးနှောက် (2) တွင်လျော့နည်းသွားμ-Opioid သို့သော် Unaltered Dopamine D2015 receptor ရရှိနိုင်နှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
အဝလွန်ခြင်းအစားအစာလှုံ့ဆော်မှု (2017) မှတုန့်ပြန် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုမရှိခြင်းနှင့်ချို့ယွင်းနှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ reactivity ကိုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပန်းတိုင်ညွှန်ကြားသည်အပြုအမူ (2011) တွင်အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများအကြားအဝလွန်ခြင်း Related ကွာခြားချက်များ
အဝလွန်ခြင်း - အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလား။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် neuropsychological မော်ဒယ် (2014)
အဝလွန်ခြင်း - ကာကွယ်နိုင်သော၊ ကုသနိုင်သော၊ ပြန်လည်ပျောက်ကင်းစေသောရောဂါ (2019)
အဝလွန်ခြင်း: Pathophysiology နှင့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး (2014)
သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှ Synaptic plasticity နှင့်စွဲတူသောအပြုအမူထစ်အငေါ့ကိုယ်ဝန်အစီအစဉ်များစဉ်အတွင်း Obesogenic အစားအစာစားသုံးမှု။ (2017)
Obesogenic အစားအစာ differential ကြွက်များတွင် (2011) sucrose နှင့် fructose စားသုံးမှု၏ dopamine ထိန်းချုပ်မှုပြောင်းလဲပစ်စေခြင်းငှါ
ကြွက်ဦးနှောက် (2014) ၏ဆုလာဘ်ဒေသများရှိမျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်သကြား Opiate ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ
Highly ပိုမိုနှစ်သက်စားနပ်ရိက္ခာ (2007) မှလီမိတက် Access ကိုအတူသည်အထိအတွက် Opioid-မှီခို Anticipatory အပျက်သဘောဆောင်သော Contrast နဲ့ Bing-လိုပဲစား
အဆိုပါ dorsal striatum (2) တွင် D3 / 2015 အဲဒီ receptor BOLD နှင့် dopamine binding အလားအလာနှင့်အတူနေသည်ဟု BMI ၏ဆန့်ကျင်ဆက်ဆံရေး
အစားအစာစွဲအယူအဆ (2014) သို့ Optogenetic နှင့် chemogenetic ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
အဓိကစိတ်ကျရောဂါဆိုင်ရာရောဂါသည်အစားအသောက်စွဲခြင်း - အရံပစ္စည်း dopamine နှင့်အဆက်အသွယ်များ (၂၀၂၀)
ကျော်, အဝလွန်ခြင်းနှင့် Dopamine receptor (2010)
အာရုံခံ RNA-binding ပရိုတိန်း HUD ၏ Overexpression တစ်ဦးဆာပတုံ့ပြန်မှု (2018) ၏ဆုလာဘ်သွေးဆောင် reinstatement တိုးပွါး
တစ်ဦးကိုကုသ-ရှာကြံနမူနာ (5) တွင်ပုံမမှန်အစာစားခြင်းအစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့် DSM-2015 အကြားထပ်တူ
စွဲလမ်းမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက်ထပ်နှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Endophenotypes (2017)
စွဲလမ်းပြီးတော့အဝလွန်ခြင်းခုနှစ်တွင်ထပ်အာရုံခံ Circuits: စနစ်များရောဂါဗေဒအထောက်အထား (2008) Nora Volkow
ကိုကင်းချိုးဖောက်အစားအစာနှင့်ကိုကင်းတွေကိုမှဦးနှောက်ကို Activation ၏ထပ်ပုံစံများ: striatal D2 / D3 receptors (2015) မှအသင်းအဖွဲ့
ချိုသောအဖျော်ယမကာများကိုဆယ်ကျော်သက်များ၏ ဦး နှောက်မှတုန့်ပြန်မှုသည်စွဲလမ်းလမ်းကြောင်းများ (2016)
အာရုံခံပလပ်စတစ်အပေါ်အာခေါင်က Hyper-ကယ်လိုရီအစားအစာများသက်ရောက်မှု (2017)
ရောဂါဗေဒကျော်: တစ် compulsive ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လွန်မြောက်အထောက်အထား (2017)
လက်လှမ်း၏ပုံစံကို cue sensitivity ကိုနှင့်အာခေါင် (2018) ရက်နေ့မှာရှိတဲ့ Junk အစားအစာအစားအသောက်များတွင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆုံးဖြတ်သည်
ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံဆက်သွယ်မှုပုံစံများအဝလွန်ဘာသာရပ်များ (2015) မှသာမန်အလေးချိန်ခွဲခြား
Pavlovian အေးစက်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive လေ့လာမှုများကျော်တစ်ဦးစွဲလမ်းအပြုအမူ (2014) ဖြစ်ပါသည်သောအယူအဆမှစိန်ခေါ်မှုများမြှင့်
Perinatal အနောက်တိုင်းအစားအသောက်စားသုံးမှု Hypothalamus အတွင်းလေးနက်တဲ့ပလပ်စတစ်နှင့် GABAergic Phenotype အပြောင်းအလဲများရစေသောနှင့် Rat (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Maturity မှမွေးဖွားခြင်းမှသည် Pathway ဆု
အလွန်အမင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာများ၏စွဲလမ်းအလားအလာများအတွက် Preclinical သက်သေအထောက်အထား: မိခင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ related လက်ရှိဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု (2016)
Prefrontal cortical BDNF: cocaine- နှင့်အစားအစာ-အားဖြည့်အပြုအမူတွေအတွက်စည်းမျဉ်းသော့ချက် (2016)
အီရန်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားအစားအစာစွဲလမ်း၏ပျံ့နှံ့: sociodemographic နှင့် anthropometric ညွှန်းကိန်းနှင့်အတူအသင်း (2018)
တစ်ဦး Bing-နညျးတူ Sucrose ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာစားသုံးမှုသည်နျူကလိယ Accumbens ရှဲလ် (2016) တွင်အလတ်စား Spiny အာရုံခံ၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ပွောငျးလဲ
တာရှညျအမြင့်အဆီအစားအသောက် ALTER DAT Gene Expression (2013) မပါဘဲ Dopamine Reuptake ကိုလျှော့ချပါ
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု (2016) ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Neurobiological ဆက်စပ်မှု
Rapid dopamine အချက်ပြ differential sucrose-ညွှန်ကြားအပြုအမူ (2011) အတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွင်းကွဲပြား microcircuits modulates
အဝလွန်ခြင်းကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးဆက်များ - Neurobiology, Food Environment and Social Policy Perspectives (2012)
အာဟာရ-တိကျတဲ့အစားအသောက်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက်သက်ရောက်မှု (2011): မူးရူးအဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာကိုစားသောကြွက် opiate ကဲ့သို့ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ် somatic ဆိုင်းဘုတ်များသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမပြကြဘူး
တစ်ဦးအဆီကြွယ်ဝသောအစားအစာ overeating မှကျရောက်နေတဲ့ Sprague-Dawley ကြွက်များတွင်လျှော့ချ accumbens dopamine (2010)
လျှော့ချအင်ဆူလင်အာရုံကျန်းမာရေး Nonobese လူသားတွေဟာ၏ Ventral Striatum အတွက် D2 /3receptor (2015) မှာအောက် Endogenous Dopamine မှ Related Is
ဦးနှောက် DNA methylation အချက်များနှင့်ကင်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့် Orexinergic စနစ် (2019) ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း: မထပ်ပါ
peptides အစာကျွေးခြင်းဖြင့်အဆိုပါ mesolimbic dopamine ဆားကစ်၏စည်းမျဉ်းဥပဒေ (2015)
သူတွေရဲ့စားသောက်ရန်အဝလွန်ခြင်း၏ဆက်ဆံရေးနှင့် Anticipatory စားနပ်ရိက္ခာဆုကြေး (2009)
အစားအသောက်ကြော်ငြာမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်အာရုံကြော activation မှအဝလွန်ခြင်း၏ relation (2014)
အဝလွန်ခြင်းမှစားနပ်ရိက္ခာစားသုံးမှုနှင့်မျှော်လင့်စားနပ်ရိက္ခာစားသုံးမှုကနေဆုကြေး၏ relation: တစ်ဦးက Functional Magnetic ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging ကလေ့လာမှု (2008)
လူ့အဝလွန်ခြင်းအတွက် neuroendocrine ဟော်မုန်းများနှင့်အင်ဆူလင် Sensitivity ကိုအစာရှောင်နှင့်အတူအလားအလာ binding dopamine အမျိုးအစား2အဲဒီ receptor ၏ relationship (2015)
sucrose မှထပ်ခါတစ်လဲလဲ access ကိုနျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ကြီးထွားများပြားစေ (2002)
သုတေသီများသည်စားနပ်ရိက္ခာကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ပတ်လမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် (2019)
ကြွက် dopamine Transporter (2003) ၏တစ်ဦး upregulation အတွက်စီစဉ်ထား sucrose access ကိုရလဒ်များကိုနှင့်အတူနို့တိုက်ကျွေးမှုကန့်သတ်
မြင့်မားတဲ့အဆီဓာတ်စာ (2013) မှတုန့်ပြန် dopamine သည့်စနစ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပြောင်းပြန်
satiated အဝလွန်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆုလာဘ်လှုပ်ရှားမှုဘက်မလိုက်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွားပေမယ့်အရသာစိတ်ကူးယဉ်တဲ့အခါမှာတိုးပွါး: ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related fMRI လေ့လာမှု (2012)
စွဲလမ်းနှင့်အတူတူညီ (2012): compulsive ကျော်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ BMI တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆုလာဘ် circuit ကို function ကို
အဝလွန်ခြင်းအတွက်ယန္တရားများဆုချ: နယူး Insights နှင့်အနာဂတ်ဦးတည် (2011)
အဝလွန်ခြင်းအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့် Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ (2014)
အမျိုးသမီး (2016) sensitivity ကိုနှင့်အစားအစာစွဲဆုချ
sensitivity ကိုနှင့် D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇဆုချ: မူးရူးစားရောဂါ (2008) ၏တစ်ဦးအမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှု
ကြွက်တစ်ကောင်ကြမ်းတမ်းသောအစာစားခြင်းအပြုအမူအတွက်သတိပေး sensitivity ကိုလိုငွေပြမှု (2019)
ဆုလာဘ်, dopamine နှင့်အစားအစာစားသုံးမှု၏ထိန်းချုပ်မှု: အဝလွန်မှုအတွက်သက်ရောက်မှု (2011)
အစားအသောက်စားသုံးမှုနှင့်အဝလွန်ခြင်း (2017) အပေါ်စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု Neurobiology ၏အခန်းက္ပ
စွဲလမ်းမှု၏ Pathophysiology အတွက်ခံတွင်း-ထိန်းညှိ Peptides ၏အခန်းက္ပ: Pharmacotherapy များအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2014)
သိပ္ပံပညာရှင်များလည်းအရက် (2012) တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်ဆက်စပ်ပရိုတင်းကိုပြသ
အပြုအမူ, အရပျကိုအေးစက်နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (2015) ထိတွေ့ကြွက်များတွင်အစာကျွေး၏အေးစက်ဖိနှိပ်မှုခုခံဖို့မရှာ
သီးခြားအာရုံကြောဆားကစ်သုတေသီများ (2015) ကိုရှာဖွေ, မတရားသော vs. ကျန်းမာစားထိန်းချုပ်ဖို့
serotonin 5-HT2C receptor Activation Bing စားသုံးမှုဖိနှိပ်ခြင်းနှင့် Hight-ဆီစားနပ်ရိက္ခာ (2018) ၏အားဖြည့်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော် Properties ကို
ရောဂါနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအစာစားမူးရူးအတွက် serotonin Transporter သိပ်သည်းဆ: [11C] Madame (2017) နဲ့တစ်ပေလေ့လာမှု
ဆယ်ကျော်သက်ကြွက် (2017) တွင်အာခေါင်-မောင်းနှင်နို့တိုက်ကျွေးရေး၏လိင်-တိကျတဲ့တိုးမြှင့်
မူးရူးစားရောဂါနှင့်စွဲလမ်းပုံမမှန် (2016) အခြေခံ shared နှင့်ထူးခြားသောယန္တရားများ
မူးယစ်ဆေးစွဲ, အဝလွန်ခြင်းနှင့် Bing စား Disorder အတွက် Shared အပြုအမူနှင့် Neurocircuitry ပြတ်တောက်: အ Mesolimbic Dopamine Pathway (2019) တွင်အုပ်စုငါ mGluRs အပေါ်အာရုံစိုက်
အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရောဂါ (2018) တို့အကြားတူညီ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်ကလေးများအတွက်အဝလွန်ခြင်းအကြားတူညီ: အစွဲမော်ဒယ် (2016)
ကြော်ငြာ libitum ကျွေးမွေးကြွက်များတွင်ရေစာအစားအသောက်စားသုံးမှုဆီဥနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များပေါင်းစပ် (2014) ကအစပျိုးနေသည်
လူ့အဝလွန်ခြင်းနှင့်အခွင့်အရေးယူစားအပြုအမူ (2) နဲ့ Striatal dopamine D2014 တူသောအဲဒီ receptor ဆက်စပ်မှုပုံစံများ
ALTER ချိုမြိန်စားကြူး Striatal Dopamine Links များအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းပြောင်းနေသည် (2015)
စွဲလမ်းမှုအတွက် Striatocortical Pathway အလုပ်မဖြစ်ပြီးတော့အဝလွန်ခြင်း: ကွာခြားချက်များနှင့်အလားတူ (2013) Nora Volkow
ဦးနှောက်၏အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆုလာဘ်ဒေသများအကြားအခြေခံအဆောက်အဦးသမာဓိရှိနာတာရှည် Dieter (2016) တွင်ခန္ဓာကိုယ်အဆီရာခိုင်နှုန်းခန့်မှန်း
ထိတွေ့မှုနှင့်ရုပ်သိမ်းရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများ (2019): Sucrose နှင့် saccharin differential ဆီးချိုကြွက်များတွင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအပြုအမူ modulate
Sucrose မျိုချမိသွေးဆောင် Rapid AMPA receptor လူကုန်ကူးမှု (2013)
sucrose စားသုံးမှု porcine ဦး နှောက်ထဲမှာμ-opioid နှင့် dopamine D2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုလျှော့ချ (2020)
ကြွက် (2011) တွင် Sucrose Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့် CNS activation
တစ်မူးရူးအချိန်ဇယားကိုထုတ်ပြန်အပေါ် Sucrose အတုအယောင်နို့တိုက်ကျွေးရေးအကြိမ်ကြိမ် dopamine accumbens နှင့် acetylcholine မွတ်မပြေနိုင်သောတုံ့ပြန်မှု (2006) ဖယ်ရှား
သကြားစွဲလမ်း: ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မှသည်တော်လှန်ရေးမှ (2018)
သကြားနဲ့အဆီ Bing ကိုစှဲကဲ့သို့သောအပြုအမူ (2009) တွင်ထင်ရှားကွာခြားချက်များဖူး
သကြားမှီခိုကြွက်နေကြပြီးသကြားအဘို့တုံ့ပြန်တိုးမြှင့်ပြသ: တစ်တွင်းသကြားဓာတ်ဟာဆင်းရဲချို့တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှု၏သက်သေအထောက်အထားများ (2005)
အနိမ့်မှုနှုန်း၏သကြားဆုတ်ခွာနှင့် differential ကိုအားဖြည့်ကြွက်များတွင် (DRL) စွမ်းဆောင်ရည် (2014)
ချိုမြိန်အရသာသာယာသောမော်ဖင်းအကိုက်နှင့် naltrexone (2016) က modulated ဖြစ်ပါတယ်
ဒူ-အဆီစားသုံးမှုအတွက်နျူကလိယ Accumbens ရှဲလ် (2013) မှရူးနှမ်းသော Gamma-Aminobutyric အက်ဆစ်-mediated ကျွေးမွေးတုံ့ပြန်ချက် Sensitizes
အဝလွန်ခြင်း၏စှဲ Dimensional (2013)
အထွေထွေနယူးဖောင်လန်ပြည်သူ့အင်အားအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အဲဒါတွေက Metabolic လက်ခဏာခါနီးတစ်ဦးကိုစှဲသဘောထားကိုအကြားအဆိုပါအသင်း (2018)
“ အစားအစာစွဲခြင်း” နှင့်ပုပ်ပျက်သောစားနပ်ရိက္ခာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထုထည်ညွှန်းကိန်းများဆက်စပ်မှု (၂၀၁၄)
အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်အတူသွေးရည်ကြည် leptin အဆင့်ဆင့်၏အသင်းအဖွဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာ (2018) တွင်အလေးချိန် status ကိုတို့ကတည်းဖြတ်နေသည်
အဆိုပါ Bing စားစကေး: ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းယှဉ်ပြိုင် & Models, ၎င်းတို့စပ်ကြားလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုအတိုင်းအတာများနှင့်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ, Impulse, Bing သောက်, နှင့်ခန္ဓာကိုယ် Mass Index (2019) နှင့်အတူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
ဦးနှောက်, အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစွဲ: တစ်ခု EEG neuroimaging လေ့လာမှု (2016)
compulsive စားအပြုအမူ (2019) ၏သိမှုယာဉ်မောင်း
အဆိုပါအဝလွန်ကပ်ရောဂါ (2013) မှဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်၏ပံ့ပိုးမှုများ
အစားအသောက်စွဲလမ်း (2011) ၏မှောင်မိုက်ဘက်
အစားအစာဆုလာဘ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း (2012) ၏ယန္တယားအကြားနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်ဘာသာဂုဏ်ထူး: စားရန်အဆိုပါ drive ကို
ပိုမိုနှစ်သက် sucrose ကြွယ်ဝအစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်း၏ကြာချိန်အထီးကြွက် (2018) တွင်မူးရူးကဲ့သို့စားသုံးမှု, အဆီစုဆောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဂလူးကို့စသက်ရောက်သည်
(-) - သည်အထိအတွက် OSU6162 Bing-လိုပဲအပေါ်စားနှင့် Cue-ထိန်းချုပ်ထားအစားအစာရှာအပြုအမူ (2018) ကို Monoamine တည်ငြိမ်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အဆိုပါသက်တမ်းတစ်လျှောက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အဝလွန်ခြင်းနှင့် hypercaloric အစားအစာစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှု (2017)
စိတ်ဖိစီးမှု Driven, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စှဲအပြုအမူ (2019) အပေါ်သကြားစားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှု
ဆုကြေးစနစ် Activation အတွက်အာခေါင် Diet ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: တစ်ဦးက Mini ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (2016)
အဆိုပါ mesolimbic စနစ်နှင့်အစာစားခြင်းစွဲ: မနှင့် (2016) ကိုမပြုဘယ်အရာကိုသကြား
နီကိုတင်းနှင့်အစားအစာစွဲလမ်း (2016) ၏ neurobiological နှင့်အမူအကျင့်ထပ်နေ
အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးရူးစား၏ neurobiological ကျောထောက်နောက်ခံ: အစားအစာစွဲမော်ဒယ်ချမှတ်များအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် (2013)
“ စားနပ်ရိက္ခာစွဲခြင်း” ၏ Neurobiology နှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုကုသမှုနှင့်မူဝါဒအပေါ်သက်ရောက်မှုများ (၂၀၁၆)
တစ်ဦး obesogenic ပတ်ဝန်းကျင် (2012) တွင်အစားအစာစားသုံးမှု၏အဆိုပါ neurobiology
အဆိုပါအဝလွန်ကပ်ရောဂါနှင့်အစားအစာစွဲ: မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့လက်တွေ့တူညီ (2012)
အဆိုပါအဝလွန်ကပ်ရောဂါ: စွဲ၏အခန်းကဏ္ဍကို (2012)
အဆိုပါ Opioid စနစ်နှင့်စားနပ်ရိက္ခာစားသုံးမှု: Homeostatic နှင့် Hedonic ယန္တရားများ (2012)
ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုမမှန်မစားမူးရူးအကြားထပ်တူ: Diagnosis နှင့် neurobiology (2013)
အဝလွန်ခြင်းနှင့်အတူအီရန်အမျိုးသမီး plasma oxytocin အဆင့်နှင့် anthropometric နှင့်အစားအသောက်တိုင်းတာ (2019) နဲ့အစားအသောက်စွဲလမ်းနှင့်၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့များ၏ပျံ့နှံ့
အဆိုပါယေးလ်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစကေးများကအကဲဖြတ်အဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ၏ပျံ့နှံ့: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2014)
အမှန်တကယ်ဖြစ်သည့်“ အစာအာဟာရဆိုင်ရာညစ်ညမ်းမှု” - အစားအသောက်နှင့်ပတ်သက်သောပုံများအပေါ် မူတည်၍ ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုပုံရိပ်များထက် cue- သွေးဆောင်ခြင်းစားသုံးမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည် (2019)
ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများအတွက်“ အစာစားခြင်း” နှင့်ဗိုက်စ်ကာဗိုက်အူသိမ်အကြားဆက်နွယ်မှု (2016)
အီသနော၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (2017) အတွင်းမြင့်မားတဲ့ဆီအစားအစာ၏မူးရူးစားခြင်းဖြင့် modulated နေကြတယ်
အဆိုပါအဝလွန်ခြင်းပျံ့နှံ့အတွက်ဆုကြေး Circuitry နှင့်စားနပ်ရိက္ခာစွဲ၏အခန်းက္ပ: တစ်ခုက Update ကို (2016)
လူ့အဝလွန်ခြင်း၏မော်ဒယ်လ်အဖြစ်မုန်ကြွက်: မုန့်ညက်ပုံစံများအပေါ်တစ်ဦးအခမဲ့-ရွေးချယ်မှုက high-အဆီမြင့်မားသောသကြားဓာတ်စာ၏ဆိုးကျိုးများ (2014)
(၁၈) လတာကာလအတွင်းလက်တွေ့မကျသောလူ ဦး ရေတွင်ယေးလ်စားနပ်ရိက္ခာစွဲလမ်းမှုနှုန်း (Yale Food စွဲစွဲလမ်းမှု) မှခန့်မှန်းထားသည့် 'အစားအစာစွဲလမ်းမှု' တည်ငြိမ်မှု (18)
အစာစားခြင်းမူးရူး၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု၏လေ့လာမှု (2010)
အဆိုပါစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဦးနှောက်စား: ပျော်ရွှင်မှုများနှင့်အလိုဆန္ဒဆားကစ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းမမှန်မှုများ (2010)
အဆိုပါ Trace Amin-Associated receptor 1 Agonist RO5256390 လုပ်ကွက်သည်အထိအတွက် compulsive, Bing-လိုပဲစား (2016)
အဆိုပါ Uncompetitive N-methyl-D-Aspartate ရန် Memantine Bing-လိုပဲစား, အစားအစာကိုရှာခြင်းအပြုအမူနှင့် compulsive စားကိုလျှော့ချ: အနျူကလိယ Accumbens ရှဲလ်၏အခန်းက္ပ (2014)
အဝလွန်ခြင်း (2014) အကြောင်း Evolutionarily စဉ်းစား
အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု (2012) ၏တစ်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်ဆီသို့ဦးတည်
အစားအစာဆီသို့ဦးတည်စွဲလမ်းသဘောထားတွေကို (2017) နှင့်အတူနယူးဖောင်လန်လူဦးရေထဲကနေလူကြီးများအတွက်ဖော်ထုတ်နှစ်ဦးကဝတ္ထုကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇ
ပိုလျှံသကြား (2019) ၏နှောင့်နှေးအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်အမေရိကန်အဝလွန်ခြင်း
sucrose အပေါ် bingeing စဉ်သိရပါကြွက် (2008) dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်တုံး acetylcholine တုံ့ပြန်မှုတိုးမြှင့်ကြ
အမျိုးမျိုးနှင့် hyperpalatability: သူတို့စွဲလမ်းကျော်ကမြှင့်တင်ကြသနည်း (2011)
အဝလွန်ခြင်းအတွက် Ventral နှင့် Dorsal Striatum ကွန်ယက်: စားနပ်ရိက္ခာတဏှာနှင့်အလေးချိန် Gain ဆီသို့လင့်ခ် (2016)
Ventral striatum တစ် dopamine D2 /3အဲဒီ receptor agonist ၏ binding ပေမယ့်ရန်ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (2015) ခန့်မှန်းမရ
အစာစားချင်စိတ်များနှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်ပြုမူပုံတွေကို (2015) အတွက် Hypothalamic ကွန်ယက် Dynamics ကိုနေပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် like နှိပ်: ပြဿနာစားအပြုအမူအတွက်သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများ? (2016)
အလေးချိန် Gain အာခေါင်စားနပ်ရိက္ခာ (2010) လူ့မှလျှော့ Striatal တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်နေသည်
အလေးချိန် Gain စားနပ်ရိက္ခာ (Dopamine) (2010) မှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကိုပြောင်းလဲဟန်
bariatric ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ကိုယ်အလေးချိန်နေကြလို့ပဲအဝလွန်ခြင်း (2015) တွင်ဦးနှောက် opioid receptors ပုံမှန်
ချောကလက်ကိုရှာကွ compulsive ဖွစျလာသည့်အခါ: Gene-ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှုတွေ (2015)
အစားအစာများကိုစှဲ Be နိုင်ပါစေဘယ်? ထုတ်ယူခြင်း, အဆီအကြောင်းအရာနှင့်များသော Load ၏အခန်းကဏ္ဍ (2015)
အဘယ်ကြောင့်အဝလွန်သည့် 21st ရာစုအတွင်းထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သနည်း အဆိုပါအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ, တွေကိုနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏လမ်းဆုံ, စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုး (2015)
နာတာရှည်ကနေဆုတ်ခွာ, အလွန်အရေးပါတယ်လို့အစားအစာမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း access ကို compulsive စားကြွက် (2012) တွင်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောအပြုအမူ induces
မြင့်မားသောအစားအစာကိုစွဲရောဂါလက္ခဏာနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ High-ကယ်လိုရီအစားအစာ-တွေကို (2012) ၏ရုပ်ပုံများကိုတုံ့ပြန်အတွက်အရှိန်မြှတုံ့ပြန်မှုကိုပြသပေမယ့်မျှမချို့ယွင်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှု
အဝလွန်ခြင်းအတွက်ချို့ယွင်းသင်ယူခြင်းအလုပ်လုပ်ကိုင် memory နဲ့ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့ (2014)
သင့်ဦးနှောက်မုန့်ညက်နှုန်းနှစ်ကြိမ်သငျသညျဆု: အစားအသောက်သင့်ရဲ့အစာအိမ် (2018) ရောက်ရှိသောအခါအသငျသညျအစာကိုစားခြင်းနှင့်လိုက်တဲ့အခါ
အစားအသောက် (2011) ရန်တုံ့ပြန်မှုများတွင်အဝလွန်ခြင်းပြရန်မဟာဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်သည်အန္တရာယ်မှာလူငယ်
(L ကို) ကြှနျုပျတို့စွဲလမ်းတပ်မက် high-အဆီ, သကြား-ဝန်ကိုထမ်းရွက်သောအရာတို့ကိုဖြစ်ပါသလား (2005)
(L) အမှိုက်မစားသောအစားအစာများကငယ်ရွယ်သော ဦး နှောက်အတွက်ပြordersနာများကိုဖြစ်စေသည်။ ကယ်လိုရီသိပ်သည်းသောအစားအစာများကိုအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းသည် dopamine အချက်ပြခြင်းနှင့်တားစီးခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းအပါအ ၀ င် prefrontal cortex ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
(L) သကြားသည်သင့် ဦး နှောက်၏ဓာတုဗေဒကိုပြောင်းလဲစေသည် (၂၀၂၀)
စားနပ်ရိက္ခာများအတွက်ထင်: စိတ်ကူးစားသုံးမှုအမှန်တကယ်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါ (2010)
dopamine receptors (2014): milkshake ဗီဇနှင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ငုံအရင်သောက်ပြီးနောက် (L) ကိုကိုယ်အလေးချိန်ကြိုတင်ခန့်မှန်း
ဟော်မုန်းမေလ Block ကိုအရက်တဏှာကိုထိန်းညှိ (L) ခံတွင်း (2015)
(L) Bing စားအပြုအမူတွေ (2012) များကဲ့သို့စွဲလမ်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ
(L) Bing ကြွက် (2014) အစားအစာအလေ့အထ၏တန်ခိုးကိုပြသ
(L) ကိုအဆက်မပြတ်ဖက်တီးအစားအစာများကိုစားခြင်းအလှည့်တစ်ဦးမကောင်းတဲ့အစားအစာ (2013) မှုတွေကိုဖြစ်စေသောအူနှင့်ဦးနှောက်အကြားဆက်သွယ်ရေး, perturbs
(L) Dopamine ဒီရေ (2015) သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆုကြေးနေရင်မြန်အောင် Activate လုပ်ဖို့ပြသင့်ကျော်အင်ဆူလင်ကိုရှငျးပွပါနိုင်ပါစေ
ဦးနှောက်ဓာတုဗေဒအတွက်ကွဲပြားမှုမှဆက်စပ် (L) ကိုစားအလေ့အထများ, ခန္ဓာကိုယ်အဆီ (2014)
လူသားတွေအတွက်အစားအသောက်စွဲလမ်းများအတွက် (L) ကိုအထောက်အထား (2011)
(L) ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေ High-အဆီအစားအသောက်များတွင် Exposure နောက်ပိုင်းမှာလူကြီးအတွက် (2017) က dopamine စနစ်၏ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ
သိပ္ပံသုတေသနကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်အတွက် (L) ကိုဖက်တီးအစားအစာများကိုစှဲလိုပဲကင်း (2011)
(L) အစားအသောက်စွဲလမ်းမှု, ပစ္စည်းမူတည်ဝေမျှမယ်ဘုံမြေပြင် (2011)
(L) အစားအသောက်စားသုံးမှုအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများအကြားတစ်ဦးထိခိုက်လွယ်လက်ကျန်ငွေ (2015)
(L) Lent အတွက်သကြားဓာတ်ကိုစွန့်လွှတ်တဲ့အခါသင့် ဦး နှောက်ဘာဖြစ်သွားသလဲ (2015)
(L) မူးယစ်ဆေးစွဲ, မကျန်းမာစားနပ်ရိက္ခာတဏှာ (2010) အလားတူဖြစ်ကြောင်းဘယ်လို
(L) အမှိုက်မစားသောအစားအစာသည် ဦး နှောက်၏အစားအစာရှာဖွေသည့်အပြုအမူကိုမည်သို့အဓိကကျသည် (2016) (BINGE MECHANISM)
(L) ကိုသကြားနှင့်အဆီပိုစားနပ်ရိက္ခာ (2016) လိုသောသို့ဦးနှောက် Tricks ကိုဘယ်လို
(L) ကိုနယူးဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုအစားအသောက်စွဲလမ်း (2013) ၏အယူအဆအတွက်ထောက်ပံ့ပေး
(L) Oreos ကအနည်းဆုံးဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်အဘို့, (2013) ကိုကင်းသကဲ့သို့စွဲလမ်းနေကြသည်
(L) အဝလွန်ခြင်းကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွင်အနည်းငယ်မျှသာပါဝင်သည်။ (၂၀၁၅)
(L) လတ်တလောလေ့လာမှုများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (2016) ၏ကလေး၏အန္တရာယ်မှမိခင်အဝလွန်ခြင်းလင့်ထားသည်
(L) ကိုသုတေသနပညာရှင်များကမတရားသော (2016) Bing ယန္တရားကနေအစားအစာစားသုံးမှုခွဲခြားသောဦးနှောက်ထဲမှာယန္တရားသော့ဖွင့်
(L) ကိုရေစာနှင့် BMI ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်မှု (2012) နှစ်ဆဆက်စပ်
(L) ကိုလေ့လာအဝလွန်ခြင်းရန် (2011) ဦးနှောက်ဆုကြေး Circuitry တွင်အင်ဆူလင်လှုပ်ရှားမှု Links
(L) ကိုလေ့လာ: အူစိတ်ကြွဆေး Endocannabinoids အတွင်းမှာပဲအဆီအားဖြင့်အစပျိုး Bing ယန္တရား (2011)
(L) လေ့ကျင့်ခန်းအဝလွန်ခြင်းတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်အစားအသောက်များတွင်ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်သောစိတ်ကူးသစ်ကိုသုတေသနများကဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ (2012)
(L) ကိုအစာကျွေးခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းအဘို့အစာစားရန်လိုအပ် inextricably (2015) နှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်
(L) အဆိုပါအဝလွန်ကပ်ရောဂါ-နားလည်မှုဦးနှောက်အစားအစာရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုဘယ်လို (2018)
(L ကို) ဤသငျသညျသကြား (2015) စားသုံးခြင်းကိုရပ်တန့်သောအခါအသင့်ဦးနှောက်မှဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါသည်
(L) ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနဲ့တူသကြားစွဲလမ်းကုသခြင်း: QUT ကမ္ဘာတွင်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှု (2016) ဦးဆောင်
(L) ကိုဖက်တီးပွဲတော်အလိုအလျောက်ရှေ့ပြေး (2011) က Driven နေသည့်အခါ
(L) သင့်ဦးနှောက်ကိုခန္ဓာဗေဒကိုသင်၏အစာရွေးချယ်မှုအဆုံးအဖြတ်အတွက် (2018) တစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါ